Casa La Higuera - Chulilla - I-Airbnb
Chulilla, Comunidad Valenciana, i-Spain
Indlu etholakala edolobhaneni elihle lase-Chelilla, idolobhana elijwayelekile lase-Mediterranean lezindlu ezimhlophe nemigwaqo emincane, kanye nezindawo zayo ezimangalisayo ezigcwele imizila, imizila yokucaca, izindawo zokugeza umfula... zilungele abathandi bemvelo!
Indlu etholakala edolobhaneni eliyi-beautifull lase-Chelilla, idolobhana lase-Tipical mediterranean nezindlu zayo ezimhlophe nemigwaqo emincane, enendawo emangalisayo yemvelo egcwele imizila yasezintabeni, imizila yokucaca, izindawo zokugeza umfula... indawo ekahle kakhulu yabathandi bemvelo!
VT-38719-V Casa La Higuera isendaweni engumakhelwane we-La Ermita, amakhilomitha angu-1.2 ukusuka edolobheni.
Indlu ingena nge-patio ehlanganyelwayo nezinye izindlu ezimbili. Indlu inezitezi ezimbili, ingadi kanye namathala amabili. Inamakamelo angu-4 anendawo yabantu abangu-7 (ukuze izivakashi ezengeziwe zihlole).
Esitezi esiphansi uzothola ikamelo lokuhlala elinekhishi elivulekile nokufinyelela okuqondile ethala nengadi, indlu yokugezela ephelele, ikamelo elinombhede olala abantu ababili nelinye ikamelo elinombhede olala umuntu oyedwa.
Ngaphansi kunelinye igumbi lokuphumula, elinye igumbi lokugezela eliphelele, ikamelo elinombhede olala abantu ababili nelinye ikamelo elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa. Desde la planta superior se puede acceder a otra terwagen y un porche.
I-Casa La Higuera itholakala endaweni engumakhelwane ne-La Ermita, amakhilomitha angu-1,2 ukusuka enkabeni yedolobhana.
Indlu inezitezi ezimbili, ingadi kanye namathala amabili. Inamakamelo okulala angu-4 anendawo yokuhlala yabantu abangu-7 (ukuze uthole izivakashi ezengeziwe, sicela uthintane nombungazi).
Esitezi esiphansi uzothola ikamelo lokuphumula elinekhishi elivulekile nokufinyelela ngqo kwi-terrace nengadi, igumbi lokugezela eliphelele, ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili nomunye onombhede olala umuntu oyedwa.
Esitezi esiphezulu kunekamelo lokuphumula, igumbi lokugezela eliphelele, ikamelo elinombhede olala abantu ababili kanti elinye elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa. Ukusuka esitezi esiphezulu ungafinyelela kwi-terrace emboziwe.
4.82 · 137 okushiwo abanye
Indawo ezungeze idolobha elikhulu i-La Ermita iyindawo ethule kakhulu engamakhilomitha angu-1 ukusuka enkabeni yedolobha, kukhona ukuhambahamba kwabahamba ngezinyawo okuxhumanisa indawo ezungeze amadolobha amakhulu nedolobhana.
Enkabeni yedolobha kunama-ultramarines, amabhikawozi, isitolo sokudla, isitolo sezidakamizwa, amakhemisi namachibi.
Kukhona nama-bar nezindawo zokudlela, ezinye endaweni efanayo yase-La Ermita.
Ayikho i-ATM, eseduze kakhulu itholakala e-Villar del Arzobispo, cishe amakhilomitha angu-13.
Indawo ethulile engumakhelwane ne-La Ermita itholakala amakhilomitha angu-1 ukusuka enkabeni yedolobhana, kukhona i-promenade yabahamba ngezinyawo exhumanisa indawo engumakhelwane nedolobhana.
Edolobhaneni ungathola ama-dimarket, amabhikawozi, inyama, isitolo, amakhemisi nesitolo se-tabacco.
Kukhona nama-bar nezindawo zokudlela, ezinye zazo endaweni engumakhelwane ne-La Hermita.
Awukho umshini wemali edolobhaneni, oseduze kakhulu use-Villar del Arzobispo (amakhilomitha angu-13 ukusuka e-Chelilla)
Uma unemibuzo noma yini oyidingayo, sicela unganqikazi ukuxhumana nombungazi.
Noma yimuphi umbuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nombungazi
Inombolo yepholisi: VT-38719-V
Hlola ezinye izinketho ezise- Chulilla namaphethelo